बजाजले ल्यायो १ लाख ३२ हजार पर्ने सस्तो कार
भारतीय अटो कम्पनी बजाजले सस्तो मूल्यको सानो कार बजारमा ल्याएको छ । २७५२ लम्बाई, चौडाई १३१२, उचार्इं १६५२ र ह्विलबेस १९२४ मिलिमिटर रहेको उक्त कार कम्पनीले इन्डोनेसियाबाट लन्च गरेको हो । डिजिटल ट्राइस्पार्क फोर भल्भ इन्जिन राखिएको कारमा ०.२ लिटरको...
प्रधानमन्त्री देउवालाई बाबुराम भट्टराईको ज्ञापनपत्र, के लेखिएको छ ? (ज्ञापनपत्रसहित)
२०७४ असार २८ बुधवार
काठमाडौं । १२ सय मेगावटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेजको माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारभन्दा अघिल्लो सरकार...
गोलभेंडा र काउलीमा अत्यधिक विषादी
-पाँचखालबाट भित्रिएको काउलीमा ६६.८ प्रतिशत, चौताराबाट आएको गोलभेंडामा ५७.५ प्रतिशतसम्म विषादी -एलर्जी, बाँझोपन, प्यारालाइसिसलगायत क्यान्सरसमेत हुन सक्छ : खाद्य प्रविधि असार २८, २०७४- उपत्यकामा भित्रिने गालभेंडा र काउलीमा विषादीको मात्रा उच्च रहेको फेला परेको छ । खाद्य प्रविधि तथा...
हेर्नुस : आज सुनको मूल्य ५३ हजारमुनि, यतिमा हुदैछ कारोबार….
२०७४ असार २७ मंगलवार
मंगलबार सुनको मूल्य ५३ हजारभन्दा मुनि कायम भएको छ। आइतबार प्रतितोला ५३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन मंगलबार ५२ हजार ८ सय रुपैयाँमा झरेको छ। सोमबार पनि सोही मूल्यमै सुनको कारोबार भएको थियो। यसअघि शुक्रबार प्रतितोला ५३ हजार ५ सय...
नोकिया र वर्ल्डलिंकले नेपालमा आधुनिक १०० जी ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क स्थापना गर्ने
काठमाडौं । फिनिस मोबाइल जाइन्ट नोकिया इंडिया र नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनि वर्ल्डलिंकले ६५० किलोमीटर लम्बाईको आधुनिक १८३० पीएसएस ( फोटोनिक सर्भिस स्विच) निर्माण गर्ने भएका छन् । नेपालमा ब्याण्डविथको अभाब यसले पुरा गर्नेछ । अन्तरशहर नेटवर्क काठमाण्डौ बाट भैरवा...
« 1 … 169 170 171 … 182 »
२०७८ वैशाख ९ बिहीवार
धरहरामा ३३० किलोको गजुर, गजुरमा ९५ तोला तीन लाल सुन
बालुवाटारसँग महन्थको 'फाइनल डिल' हुँदै गर्दा जसपा विभाजनतिर !
२०७८ वैशाख ८ बुधवार
२०७८ वैशाख ६ सोमवार
बैशाख ५ गते आइतवारको राशिफल यस्तो छ
२०७८ वैशाख ५ आइतवार
आफैले भाउजुको हत्या गरेर प्रहरी कार्यालय पुगेपछि
शिखर मिडिया नेटवोर्क प्रा लि का लागि राम केसि द्वोरा सन्चालित, निर्देसक सुरज खड्का,
प्रधान सम्पादक उदय जिएम ,सम्पादक हरेराम तिमील्सिना ।